Warshadaha suuqgeynta internetka ayaa sii wadaya inay horumar ka sameeyaan bixinta tikniyoolajiyadda u saamaxaya suuqleyda inay labadaba saadaaliyaan oo ay bixiyaan khariidado lagu caawiyo macaamiisha iyo ganacsiyada inay beddelaan Waxaan sameynay xoogaa mala-awaal ah illaa heerkaan, in kastoo. Mawduuca guud ee shakhsiyaadka shakhsiyadeed iyo iibka iibku aad ayuu uga sii jilicsan yahay uguna dabacsan yahay sidii aan waligay malayn. Cisco waxay bixisay cilmi baaris in celceliska wax soo saarka la iibsaday uu ka badan yahay 800 safarro macaamiil oo kala duwan oo u horseedaya. Ka fikir
Qof kastaa wuxuu sameynayaa saadaashiisa dhamaadka sanadka. Waxaan u maleynayaa inaad iska dhaafi kartid dhammaan hoopla oo aad ka shaqeyn karto istiraatiijiyad suuqgeyn ah sanadka soo socda oo ku saleysan dhammaan xaqiiqooyinka. Istaraatiijiyooyin badan oo channel ah, otomaatiga suuq geynta, mobilada iyo fiidiyaha ayaa sii wadaya ka shaqeynta iyo ka ganacsiga taraafikada ganacsigaaga. Halkan waxaa ku yaal macluumaad faahfaahsan oo leh tirooyin fantastik ah oo taageeraya baahidaada inaad hirgeliso istaraatiijiyad suuq geyn ah oo fiidiyoow ah sanadka 2014. Delos Incorporated wuxuu wadaagaa Talooyinkan Suuqgeynta Fiidiyowga: Qorshaha -
Dhowr sano ka hor, waxaan dhab ahaan kulan la yeelannay qaar ka mid ah guddiga Cisco oo loo maro Telepresence mana ahayn wax la yaab leh. Lahadalka qof cabir buuxa iyo fool-ka-waji wuxuu leeyahay qiime aan caadi aheyn. Dadka ka shaqeeya Cisco way oggol yihiin oo waxay soo bandhigeen sawirkan ku saabsan awoodda shirarka shakhsi ahaaneed. Baahida suuqa baahsan ee caalamiga ah ayaa wax ka badalay habka ururadu ula xiriiraan asxaabta, alaab-qeybiyeyaasha / shuraakada, iyo macaamiisha laga yaabo inay kala maqnaadaan